Tag: tambajotram-pifandraisana sosialy | Martech Zone
Tag: tambajotram-pifandraisana sosialy
Tsy tsotra araka ny fiheveran'ny olona azy. Azo antoka, taorian'ny niasa am-polony taona lasa izay, manana heck iray manaraka tsara amin'ny media sosialy aho. Saingy ny orinasa madinidinika dia matetika tsy manana folo taona hampiakarana sy hampisy hery ny paikadin'izy ireo. Na dia amin'ny orinasako kely aza dia fanamby ny fahafahako manatanteraka tetikady marketing amin'ny haino aman-jery sosialy be tetikady ho an'ny orinasako kely. Fantatro fa mila manohy mampitombo ny tanjoko aho